क्रसरको समस्या स्थानिय प्रहरी प्रशासनबाट जादु गरे जसरि समाधान हुदैन-प्रजिअ कुरुम्बाङ्ग - जागरण अनलाइन
दाङ । दाङको छिमेकी जिल्ला बाकेमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग अबैध र मापदण्ड बिपरितका क्रसर बन्द गराएर चर्चामा आए । हालै मात्रै गृहमन्त्रालयबाट दाङ सरुवा भइ आएका उनै प्रजिअ कुरुम्बाङ्गले आफू क्रसर बन्द गराउने पक्षमा नरहेको बताएका छन ।
उनले बिकास निर्माणमा नदिजन्य पदार्थ अत्यन्त आबश्यक पर्ने भएकाले बिकास निर्माणको सवालमा क्रशर बन्द गर्ने कुरा आफू नरहेको बताए । उनले नदिजन्य अबैध उत्खननमा मापदण्ड बिपरित गरेको पाइए तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
उनले दाङमा बैध क्रसर १-२ वटा बाहेक खासै नरहेको र अरु सबै क्रसर बन्द गर्नुपर्ने अबस्था आउने बताए । स्थानीय प्रहरी प्रशासनले जादु गरे अनुसार क्रसर बारे केही गर्न नसक्ने उनले बताए । पैसाको कुनै लोभ नगरे कसैले प्रश्न चिन्ह नै नउठाउने उनले बताए । बिकास र सुसासन पनि जोडिएकाले क्रसरको समस्या रास्ट्रिय समस्या भएको तर्क समेत गरे । अबैध उत्खननमा सहयोग गरेको पाइए सबै कानुनी दायरामा आउने चेतावानि दिए । नियमपुर्बक उत्खनन् हुनुपर्ने भन्दै यहा चोर्ने प्रबृत्ति धेरै रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले मापदण्ड पुर्याएर हुने दोहन ठिक भएको र नदिजन्य पदार्थले भरिएको अबस्थामा निकाल्दा राम्रो हुने तर्क गर्दै उनले चोरेर दोहन गर्ने कामले समस्या उत्पन्न गराउने पनि बताए ।
फरक प्रसङ्गमा प्रजिअ कुरुम्बाङ्गले घोराही सिमेन्टको चुनढुङ्गा नै खराब रहेको भन्दै अहिले अनुगमन गरे पनि गुणस्तर नाप्ने हो भने त्यसको मापदण्ड नपुग्ने दाबी गरे । उनले आफू बर्दियामा रहदा तत्कालिन अबस्थामा गुणस्तरहिन सिमेन्ट उत्पादन गरेको आरोपमा उद्याेगको सन्चालकलाई थुनेर कारबाही गर्नुको साथै ३० लाख जरिवाना गरेको बताए । आफू बिकास निर्माण तर्फ लाग्ने भन्दै बिकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती सबै मिलेर रोक्नुपर्ने उनले बताए ।
कांग्रेस इकाइ सभापतिसहित क्षेत्रिय प्रतिनिधी छान्न सौडियारमा समिति गठन
२०७८ भाद्र १५, मंगलवार २१:५१
मेटमणि चौधरीले जवाफ फर्काउदै भने : हेर्दाहेर्दै ! शंकर पाेख्रेल बिमलाकाे राजिनामा माग्ने ठाँउमा झरे !
२०७८ भाद्र ६, आईतवार २१:४२
कम्युनिष्ट पाटी पुर्नगठनका लागि एकिकृत समाजवादी गठन : केन्द्रिय सदस्य बिश्वासी
२०७८ भाद्र ५, शनिबार २३:११
एमाले दाङका अध्यक्ष टिकाराम खड्काले भने-ओलि गुटमा गएको छैन, शंकर पोखरेलको दम्भका कारण पार्टी बिभाजन !
२०७८ भाद्र ३, बिहीबार १५:१४